TSIAD ရှိအစီအစဉ် Trabzon မီးရထား RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ61 TrabzonTSIAD ရှိအစီအစဉ် Trabzon မီးရထား
16 / 11 / 2019 61 Trabzon, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
tsiadda gundem trabzon ရထားလမ်း
TSIAD ရှိအစီအစဉ် Trabzon မီးရထား၊ Trabzon စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏အပတ်စဉ်ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် Trabzon Erzincan မီးရထားပလက်ဖောင်းအဖွဲ့ဝင် Ortahisar နှင့် Metropolitan မြူနီစီပယ်ကောင်စီဝင် Mustafa Yaylalıတို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
TSRI ဥက္ကPresident္ဌ Sirri Eren က biri အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၏တာ ၀ န်တစ်ခုမှာမြို့တော်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ်လူထုအမြင်ကိုဖန်တီးရန်နှင့်မြို့၏အမြင်ကိုပံ့ပိုးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမြို့တော်၏အနာဂတ်တွင်အလွန်အရေးကြီးသောမီးရထားလမ်းစီမံကိန်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရန်နှင့်ဤအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး 2010 မှဤပြvoနာကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည့်မီးရထားပလက်ဖောင်းမှ Mustafa Yaylalı Mustafa Yaylalı။
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကpresident္ဌဟောင်းမစ္စတာယေးလလီကိုဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာသူပါဝင်ခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျွန်း၊ တောင်ဘက်လမ်းမကြီးသည်မီးရထားလမ်း၏မြို့တော်၏အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်စီမံကိန်းများဖြစ်သည်။ ငါတို့မြို့၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ မီးရထားလမ်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်များကဲ့သို့သောအများအကျိုးအတွက်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်လျှင်အတူတကွစဉ်းစားရန်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။ TSIAD အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းသားများသည် Trabzon ၏ပြourနာများကိုသတိပြုမိမည့်အစည်းအဝေးများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်လူတိုင်းသည်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးပေါ်ရှိပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။
TSIAD နှင့်ပတ်သက်ပြီး Trabzon-Erzincan ၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သို့တင်ပြသည့်မီးရထားပလက်ဖောင်းအဖွဲ့ဝင် Mustafa Yaylalıကပထမဆုံးအကြိမ်ကုန်တင်ရထားသည်တရုတ်နိုင်ငံမှထွက်ခွာပြီး Marmaray သုံး၍ ပရာ့ဂ်သို့သွားခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများပြန်လည်တည်ဆောက်နေကြသည်။ ယနေ့တရုတ်သည်ဘောလ်တစ်နိုင်ငံများသို့ရောက်ရှိရန်စီစဉ်နေပြီဖြစ်သည်။
Trabzon နှင့် Kherson တို့သည်ဤအစီအစဉ်တွင်အလွန်အရေးကြီးသောဆိပ်ကမ်းများဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သို့ Erzincan Erbaşကို ဖြတ်၍ အဓိကရထားလမ်းကိုထည့်သွင်းမည့်ပင်လယ်နက်နှင့်အတိုဆုံးအကွာအဝေးမှာ 230 ကီလိုမီတာရှိသော Trabzon ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရွေ့လျားနိုင်မှုသည် Trabzon ဆိပ်ကမ်းကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေပြီးရုရှားနှင့်လိုင်းအသစ်များနှင့်အစီအစဉ်သစ်များလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတဆင့်ဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ Samsun Sarp မီးရထားသည်ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးမှုမှာခရီးသည်များကိုမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်စည်ဖြင့်ဖြတ်သန်းသွားသောကမ္ဘာ့စျေးကွက်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရထားလမ်းအားဖြင့်, Trabzon နောက်တဖန်တစ်စင်တာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Erzincan နှင့်ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးမားဆုံးကုန်သွယ်ရေးလိုင်းနှင့်လည်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဒီမျဉ်းကြောင်းကိုDiyarbakırကထောက်ခံလိမ့်မယ်။ GAP ထုတ်ကုန်တွေကမြောက်ပိုင်းစျေးကွက်ကိုသွားလိမ့်မယ်။ Erzincan မီးရထားသည် ၀ င်ရိုးများအားလုံးကိုဆက်သွယ်ပေးသောအရေးကြီးသောနေရာတွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့များကိုဤလိုင်းနှင့်ကုန်သွယ်မှုပမာဏအရစီစဉ်ထားသင့်ပြီး၊ ကြီးမားသောကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်ပင်လယ်နက်၏မြောက်ပိုင်းဆိပ်ကမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုတည်ဆောက်သင့်သည်။ မြင့်မားသောနည်းပညာအပေါ် အခြေခံ၍ စက်မှုဇုန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော Arsin Investment Island ကိုဤနေရာတွင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသောလိုင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးစားပွဲပေါ်ချသင့်သည်။ ဒီရူပါရုံကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုက်ရင်အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်တွေကလည်းဒီအခြေအနေကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာပါ။ Rize, Hopa, Batumi မီးရထားကိုလည်းစီးပွားရေးအရပိုပြီးဖွဲ့စည်းသွားမှာပါ။ ”
TSIAD ဥက္ကPresident္ဌ Sirri Eren Trabzon-Erzincan မီးရထားလမ်းကြောင်းမှအဖွဲ့ဝင် Mustafa Yaylali သည်သူ၏အသေးစိတ်တင်ပြချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ (.ရာဝတီ)
တက္ကသိုလ်မီးရထား Eurasian ရေးရာ
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Gurun ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးစတော့ရှယ်ယာများ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုမှလစျြလြူရှု
'' Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစားထိုးအတွက် '' စီးတီးကောင်စီအစီအစဉ်
မြို့တော်ဝန် Kocaoglu ကျွန်မ TV ပေါ်မှာဖြစ်ရပ်ဖန်တီး!
Erzincan-Trabzon Trabzon မီးရထားအဆိုပြုချက်မှ
Trabzon လက်ထောက် Kumar က Trabzon စီမံကိန်းဖို့တောင်းခဲ့သည်!
အဆင့်အဆုံးအားဖြင့် Samsun ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကအဆင့်နီး
လက်ထောက်ဆိုလူ - "ရထားခရီးစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ...
လျင်မြန်စွာအဆင့်ရထား Bursa မှချဉ်းကပ်နေသည်
ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းသွား Samsun သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Metrobus!
3 ။ Step လေဆိပ်ဖွင့်ပွဲပြင်ဆင်
အဆင့် Wagon Caféလူငယ်စင်တာအဆင့်ဖွအတူ Bilecik
Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği